zvechokwadi kuwana Holland Tulip Season nechitima kunotodiwa pakarenda chero kuzvipira kuremekedza zhizha mufambi wacho. Kwemwedzi kana kuti pagore, paminda enyika Flevoland tinoshandurirwa yakanaka uye yakakura gungwa mavara seruva zvinopfuura 7…
Zvitima mu Europe vane hombe chinhu; tinoda njanji edu, uye isu tichati kusarudza navo pamusoro mimwe mhando zvokufambisa chero nguva. Kunze kuwana kubva nguva A anogumira B mune hadzi, akasununguka uye yakavimbika netsika, pane zvakawanda kwazvo…
The Flam njanji mutsetse kubva Flam kuna Myrdal anonzi chimwe yakaisvonaka chitima nzendo munyika uye tinogona kunzwisisa nei. Rwendo chete anotora paawa asi zvandakaona zvechokwadi mweya-kupinza. Musapotse chiitiko ichi apo achishanyira…
Kana uine mavhiki maviri kupedza kuSpain, imwe yenzira kuti kumativi ari kuongorora Spain nechitima. Kwete chete ichi kuchaita kuti uone mamwe incredible zvinotyisa kumativi nyika, asi chitima kufamba muSpain ndiye nyatsoshanda chaizvo…
A itsva chitima mutsetse wakatanga kurwisa, chokufuka Azerbaijan, Teki, uye Georgia. The mutsetse runofukidza 820 Makiromita uye rinokwana freights kuwedzera mutakurwi nezvitima. Chekutanga, muganhu uchava wokutanga kubatanidza Europe uye China vachigere pavaigona kutora chikepe chaienda Russia. The train will operate from…
Kune vakawanda dzinonakidza uye kushingaira chitima nenhepfenyuro muSpain. Uchawana kumhanya, svikiro daro, zvenharaunda, yemo uye hotera-chitima kufamba munyika. Kubva guru ano pazviteshi kuti madiki vane akapoteredzwa pachisikirwo, izvi 10 of Spain’s most Fascinating Train…
Chitima Mazano nokuti vaifamba kumativi Europe zvinokosha vafambi. Chekutanga, pane zvakawanda zvakasiyana zvikonzero kuenda Europe. Ungada kuona mabhiriji akanaka, njanji dzemapurisa, uye zvakafanana mukare girl. Kana zvichida uri parwendo kuona zvinoshamisa tsika Italy. On…
Budapest zvechokwadi nomusimboti Hungary. Chinhu chinokosha pfungwa panyaya vaienda nechitima muBudapest mune nezvitima zhinji rega. Nepo Travel nechitima muBudapest uye zvavo zvinonakidza uye kazhinji chiitiko chitsva kuvanhu vazhinji,…
Nokuti vose vanoshingaira vafambi kunze uko vari kutsvaka nzvimbo muEurope tichironga nechitima nokuti zviri nani vanogamuchira kwataiitwa mabayo njanji kufamba pane ndege, pano chimedu nhau kwauchaita rudo. European chitima nzendo makatasva daily…
Kutanga kwazvose, pachava akasununguka nezvitima kusvika 30,000 kuyaruka chirimo ichi. Kuwanda vakasununguka matikiti vangatoona kuwedzera zvichienderana kwokudiwa. The EU anowedzera yakazivisa kuti zvichaita kuti chikumbiro kuwanikwa kuyaruka vakwegura 18 uye muduku. Nekuda kwe…